ဂိမ်မာတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဘာလို့ ပိုထူးချွန်ကြတာလဲ? – Gaming Noodle
ဂိမ်မာတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ဘာလို့ ပိုထူးချွန်ကြတာလဲ?
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဂိမ်းလောကရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတဈေးကွက် တန်ဖိုးနှစ်ခုပေါင်းထက် ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ဗီဒီယိုဂိမ်းများကို နှစ်ခြိုက်စွာ ကစားကြသူများဟာလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးပွားလာနေလို့ esports ဟာ နေရာတိုင်းမှာ မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူအနည်းစုကသာ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေကို CV ထဲမှာ ထည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သင်ရော ဘာလို့ မပါဝင်သေးတာလည်း? ယနေ့ခေတ်မှာ ဂိမ်းထဲမှာ သင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Skill တွေကို လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ပြန်အသုံးချလို့ ရနေပါပြီ။
ယနေ့ခေတ် ဂိမ်းတွေဟာ ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုထက် ပိုပြီး လူတွေရဲ့ အတက်ပညာတွေကို တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နေနိုင်ပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့် Dota2 တို့ Mobile Legends လိုဂိမ်းမျိုးဟာ Teamwork ရဲ့ အရေးပါမှုကို သိရှိစေနိုင်ပြီး PUBG တို့ CSGO တို့လိုဂိမ်းမျိုးဟာ အရာရာတိုင်းကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ တိတိကျကျ ဆုံးဖြတ်မှ အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ကို လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးရိုးစွဲသူအချို့ကတော့ ဂိမ်းကစားခြင်းဟာ အချိန်ဖြုန်းခြင်းသက်သက်သာဖြစ်တယ်လို့ စွပ်စွဲနေကြပေမယ့် ဒီအချက်ဟာ မမှန်ကန်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂိမ်းကစားလာခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများ အလေ့အကျင့်များ နဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုများကို အလုပ်ကျွမ်းကျင်လာအောင် အမှန်တကယ်အသုံးချနိုင်ကြောင်းတို့ကို လူအများက လက်ခံလာကြပါတယ်။
Game Academy ရဲ့ လေ့လာချက်များအရတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဂိမ်းများဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်များနဲ့ ဆက်စပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် tower defense ဂိမ်းများနဲ့ puzzle ဂိမ်းများကို IT နယ်ပယ်နဲ့ နီးစပ်သူများ ပိုမိုဆော့ကစားလေ့ရှိကြပြီး strategy ဂိမ်းများနဲ့ resource management များကို စိတ်ဝင်စားကြသူများကတော့ management သမားများ ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးတွေပါ။ ဒီဂိမ်းများဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စွမ်းရည်များ ရရှိလာအောင်လည်း အထောက်အကူပြုကြပါတယ်။
Game Academy Founder David Barrie
ဒါပေမယ့် ဂိမ်းများကို အပေါ်ယံလောက်ပဲ ဆော့ကစားသူများကတော့ ရသင့်သလောက် စွမ်းရည်များ မရရှိကြပါဘူး။ Game Academy ရဲ့ co-founder ဖြစ်သူ David Barrie က “ဂိမ်းများကို အပေါ်ယံကစားများထက် လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီး ကစားကြသူများဟာ စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားလာကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂိမ်းကစားခြင်းကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်များ၊ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနိုင်စွမ်းများ၊ နည်းလမ်းရှာဖွေပြုလုပ်နိုင်စွမ်းများ စတာတွေထုတ်ယူနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်အဖြစ် ယူဆပါတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။
Royal Air Force (RAF) တို့လို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကတောင် gamer များကို နေရာပေါင်းစုံအတွက် ခေါ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ “အချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်ခြင်း၊ လျင်လျင်မြန်မြန် လှုပ်ရှားတုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ဖိအားအောက်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း စတာတွေဟာ gamer များမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့စွမ်းရည်များ ဖြစ်တယ်။” လို့ RAF ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူတစ်ဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဂိမ်းကစားခြင်းကနေတစ်ဆင့် gamer များဟာ အသင်းလိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနဲ့ နည်းဗျူဟာ ချမှတ်အသုံးပြုချမှတ်နိုင်စွမ်းများ စတာတွေကို ရရှိနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုရရှိလာတဲ့ စွမ်းရည်များနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများဟာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး ကိုက်ညီမှု ရှိတယ်။” လို့ လန်ဒန်အခြေစိုက် Hays recruitment ကုမ္ပဏီရဲ့ regional director ဖြစ်သူ Ryan Gardner က ပြောပါတယ်။
စကော့တလန်မှာရှိတဲ့ University of Glasgow နဲ့ အချို့တက္ကသိုလ်များက ဂိမ်းကစားတဲ့ကျောင်းသားများဟာ ဘဝမှာ ပိုမိုအောင်မြင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်မခံသူများကတော့ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း Glasgow တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Matthew Barr က ပြောပါတယ်။ “ဂိမ်းကို ကြိုးကြိုးစားစားဆော့ရင် အလုပ်ရဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ လူအချို့က ယူဆနေကြတာဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူနိုင်သူများဟာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာရင် ကျွမ်းကျင်ဖို့ အလားအလာများပါတယ်။” လို့လည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“EVE Online ဂိမ်းကို ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်သူတစ်ဦးဟာ MBA ဘွဲ့ရထားသူတစ်ဦးနဲ့ အနေအထားခြင်း တူညီပါတယ်” လို့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ Matthew Ricci က Kotaku ကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ EVE Online ဟာ MMO အမျိုးအစားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းဂိမ်းထဲက စီးပွားရေးဆိုင်ရာသီအိုရီများဟာ အပြင်လောကနဲ့ အလွန်တူညီအောင် ပြုလုပ်ထားတာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ဂိမ်းထဲမှာ spaceship အသစ်တစ်စင်းဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူစရိတ် စတာတွေကို spaceship သွားမယ့်ခရီးနဲ့ demand တို့ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တွက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်သလို အခြားကစားသမားများဆီက ဝယ်ယူရမယ့် စရိတ်ဖိုးလျော့ချသက်သာအောင် ကြံဆရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တွေလိုအပ်ပါတယ်။
Matthew Ricci ဟာ EVE Online ပေါ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုများကို အခြေခံလို့ ဖခင်ရဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Zentech ကို ဦးဆောင်လာခဲ့တာဟာ အခုဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ EVE ကနေ ရရှိခဲ့တာတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်နိုင်စွမ်း စတာတွေဖြစ်တယ်လို့ သူက ယုံကြည်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ National Health Service (NHS) ရဲ့ radiotherapy physicist တစ်ဦးဖြစ်သူ Mark Long က ကုသရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရတဲ့ သူ့အလုပ်အတွက် ဂိမ်းကစားခြင်းကရတဲ့ အတွေ့အကြုံများဟာ အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်စဉ်က Palace of Magic တို့လို problem solving ဂိမ်းများကို နှစ်သက်စွာ ကစားလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Mark Long ပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာများကတော့ ကင်ဆာကုသရာမှာ ကင်ဆာအကျိတ်ကိုပဲ radiation ထိအောင်လုပ်ရပြီး အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အတတ်နိုင်ဆုံး မထိအောင်လုပ်ရသလို တစ်ခေါက်ထက်တစ်ခေါက် ကုသတာပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဂိမ်းတစ်ခုထဲမှာ high score တင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ တူညီလှပြီး ကင်ဆာကျိတ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရတဲ့အတွေ့အကြုံများဟာလည်း problem solving ဂိမ်းကစားရတဲ့ အတွေ့အကြုံများနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူလှကြောင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာမဆို အလွန်အကျွံလုပ်ရင် ဆိုးကျိုးများရှိလို့ ဂိမ်းအလွန်အကျွံဆော့ကစားခြင်းကတော့ လူအများနဲ့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဂိမ်းကစားခြင်းက ရတဲ့ အကျိုးတရားများဟာ မျက်ဝါးထင်ထင်ရှိနေပြီး တကယ့်ဘဝမှာ အသုံးချလို့ရကြောင်းကတော့ ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ Esports သတင်းများနဲ့ အကြောင်းအရာများကို Gaming Noodle မှ အမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Source: BBC’s Article :How playing video games could get youabetter job
ဂိမျမာတှဟော လုပျငနျးခှငျဘာလို့ ပိုထူးခြှနျကွတာလဲ?
တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဂိမျးလောကရဲ့ဈေးကှကျတနျဖိုးဟာ ရုပျရှငျနဲ့ ဂီတဈေးကှကျ တနျဖိုးနှဈခုပေါငျးထကျ ကြျောလှနျခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးမှာ ဗီဒီယိုဂိမျးမြားကို နှဈခွိုကျစှာ ကစားကွသူမြားဟာလညျး တဈနှဈထကျတဈနှဈ တိုးပှားလာနလေို့ esports ဟာ နရောတိုငျးမှာ မထေ့ားလို့ မရတဲ့ အရာတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ လူအနညျးစုကသာ ကိုယျကြှမျးကငျြတဲ့ ဂိမျးအမြိုးအစားတှကေို CV ထဲမှာ ထညျ့လရှေိ့ကွပါတယျ။ သငျရော ဘာလို့ မပါဝငျသေးတာလညျး? ယနခေ့တျေမှာ ဂိမျးထဲမှာ သငျကြှမျးကငျြတဲ့ Skill တှကေို လုပျငနျးခှငျတှမှော ပွနျအသုံးခလြို့ ရနပေါပွီ။
ယနခေ့တျေ ဂိမျးတှဟော ဖြျောဖွမှေုတဈခုထကျ ပိုပွီး လူတှရေဲ့ အတကျပညာတှကေို တိုးတကျအောငျ စှမျးဆောငျနနေိုငျပါပွီ။ ဥပမာအားဖွငျ့ Dota2 တို့ Mobile Legends လိုဂိမျးမြိုးဟာ Teamwork ရဲ့ အရေးပါမှုကို သိရှိစနေိုငျပွီး PUBG တို့ CSGO တို့လိုဂိမျးမြိုးဟာ အရာရာတိုငျးကို စိတျရှညျရှညျနဲ့ တိတိကကြ ဆုံးဖွတျမှ အောငျမွငျနိုငျမှာဖွဈကွောငျး ကြှနျတျောတို့ကို လကေ့ငျြ့ပေးနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရှေးရိုးစှဲသူအခြို့ကတော့ ဂိမျးကစားခွငျးဟာ အခြိနျဖွုနျးခွငျးသကျသကျသာဖွဈတယျလို့ စှပျစှဲနကွေပမေယျ့ ဒီအခကျြဟာ မမှနျကနျကွောငျး၊ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဂိမျးကစားလာခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံမြား အလအေ့ကငျြ့မြား နဲ့ စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာကွံ့ခိုငျမှုမြားကို အလုပျကြှမျးကငျြလာအောငျ အမှနျတကယျအသုံးခနြိုငျကွောငျးတို့ကို လူအမြားက လကျခံလာကွပါတယျ။
Game Academy ရဲ့ လလေ့ာခကျြမြားအရတော့ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ ကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ဂိမျးမြားဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပျအကိုငျမြားနဲ့ ဆကျစပျလရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ tower defense ဂိမျးမြားနဲ့ puzzle ဂိမျးမြားကို IT နယျပယျနဲ့ နီးစပျသူမြား ပိုမိုဆော့ကစားလရှေိ့ကွပွီး strategy ဂိမျးမြားနဲ့ resource management မြားကို စိတျဝငျစားကွသူမြားကတော့ management သမားမြား ဖွဈနတေတျတာမြိုးတှပေါ။ ဒီဂိမျးမြားဟာ သူတို့ရဲ့အလုပျနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ စှမျးရညျမြား ရရှိလာအောငျလညျး အထောကျအကူပွုကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဂိမျးမြားကို အပျေါယံလောကျပဲ ဆော့ကစားသူမြားကတော့ ရသငျ့သလောကျ စှမျးရညျမြား မရရှိကွပါဘူး။ Game Academy ရဲ့ co-founder ဖွဈသူ David Barrie က “ဂိမျးမြားကို အပျေါယံကစားမြားထကျ လေးလေးနကျနကျစဉျးစားပွီး ကစားကွသူမြားဟာ စှမျးရညျပိုမိုမွငျ့မားလာကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ ဂိမျးကစားခွငျးကို ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးစှမျးရညျမြား၊ အပွိုငျအဆိုငျကွိုးစားနိုငျစှမျးမြား၊ နညျးလမျးရှာဖှပွေုလုပျနိုငျစှမျးမြား စတာတှထေုတျယူနိုငျတဲ့ အရငျးအမွဈအဖွဈ ယူဆပါတယျ။” လို့ ဆိုပါတယျ။
Royal Air Force (RAF) တို့လို စဈဘကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြားကတောငျ gamer မြားကို နရောပေါငျးစုံအတှကျ ချေါယူခွငျးမြား ပွုလုပျလာကွပါတယျ။ “အခကျြအလကျမြားကို ကောငျးမှနျစှာ နားလညျခွငျး၊ လငျြလငျြမွနျမွနျ လှုပျရှားတုံ့ပွနျနိုငျခွငျး၊ အသငျးအဖှဲ့နဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျခွငျး၊ ဖိအားအောကျမှာ အလုပျလုပျနိုငျခွငျး စတာတှဟော gamer မြားမှာ တှရေ့လရှေိ့တဲ့စှမျးရညျမြား ဖွဈတယျ။” လို့ RAF ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရသူတဈဦးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ဂိမျးကစားခွငျးကနတေဈဆငျ့ gamer မြားဟာ အသငျးလိုကျအလုပျလုပျနိုငျစှမျး၊ ပွဿနာဖွရှေငျးနိုငျစှမျးနဲ့ နညျးဗြူဟာ ခမြှတျအသုံးပွုခမြှတျနိုငျစှမျးမြား စတာတှကေို ရရှိနိုငျကွပါတယျ။ ဒီလိုရရှိလာတဲ့ စှမျးရညျမြားနဲ့ ကြှမျးကငျြမှုမြားဟာ သကျဆိုငျရာလုပျငနျးခှငျမြားအတှကျ အလှနျအသုံးဝငျပွီး ကိုကျညီမှု ရှိတယျ။” လို့ လနျဒနျအခွစေိုကျ Hays recruitment ကုမ်ပဏီရဲ့ regional director ဖွဈသူ Ryan Gardner က ပွောပါတယျ။
စကော့တလနျမှာရှိတဲ့ University of Glasgow နဲ့ အခြို့တက်ကသိုလျမြားက ဂိမျးကစားတဲ့ကြောငျးသားမြားဟာ ဘဝမှာ ပိုမိုအောငျမွငျကွောငျး ထုတျပွနျမှုမြားပွုလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျမခံသူမြားကတော့ ရှိနဆေဲဖွဈကွောငျး Glasgow တက်ကသိုလျရဲ့ ဆရာတဈဦးဖွဈသူ ဒေါကျတာ Matthew Barr က ပွောပါတယျ။ “ဂိမျးကို ကွိုးကွိုးစားစားဆော့ရငျ အလုပျရဖို့ ခကျခဲတယျလို့ လူအခြို့က ယူဆနကွေတာဟာ မှားယှငျးပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အှနျလိုငျးဂိမျးတဈခုမှာ အသငျးခေါငျးဆောငျတာဝနျယူနိုငျသူမြားဟာ လုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈလာရငျ ကြှမျးကငျြဖို့ အလားအလာမြားပါတယျ။” လို့လညျး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။
“EVE Online ဂိမျးကို ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျသူတဈဦးဟာ MBA ဘှဲ့ရထားသူတဈဦးနဲ့ အနအေထားခွငျး တူညီပါတယျ” လို့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈသူ Matthew Ricci က Kotaku ကို ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ EVE Online ဟာ MMO အမြိုးအစားဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး ယငျးဂိမျးထဲက စီးပှားရေးဆိုငျရာသီအိုရီမြားဟာ အပွငျလောကနဲ့ အလှနျတူညီအောငျ ပွုလုပျထားတာပါ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ဂိမျးထဲမှာ spaceship အသဈတဈစငျးဆောကျတော့မယျဆိုရငျ ထုတျလုပျမှုကုနျကစြရိတျ၊ ကုနျကွမျးဝယျယူစရိတျ စတာတှကေို spaceship သှားမယျ့ခရီးနဲ့ demand တို့ အပျေါမှာ အခွခေံပွီး တှကျထုတျယူရမှာဖွဈသလို အခွားကစားသမားမြားဆီက ဝယျယူရမယျ့ စရိတျဖိုးလြော့ခသြကျသာအောငျ ကွံဆရမှာပါ။ ဒီလိုလုပျနိုငျဖို့အတှကျ ကြှမျးကငျြမှုစှမျးရညျတှလေိုအပျပါတယျ။
Matthew Ricci ဟာ EVE Online ပျေါမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ကြှမျးကငျြမှုမြားကို အခွခေံလို့ ဖခငျရဲ့စီးပှားရေးကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Zentech ကို ဦးဆောငျလာခဲ့တာဟာ အခုဆိုရငျ နိုငျငံတကာမှာ အောငျမွငျမှုအတိုငျးအတာတဈခုထိ ရရှိထားတဲ့ကုမ်ပဏီဖွဈလာခဲ့ပွီး ကနဒေါနိုငျငံရဲ့ဈေးကှကျကိုလညျး ထိုးဖောကျဝငျရောကျနိုငျပါပွီ။ EVE ကနေ ရရှိခဲ့တာတှဟော တီထှငျဖနျတီးနိုငျစှမျး၊ ခေါငျးဆောငျနိုငျစှမျး၊ အဖှဲ့အစညျးတညျထောငျနိုငျစှမျး စတာတှဖွေဈတယျလို့ သူက ယုံကွညျပါတယျ။
အင်ျဂလနျနိုငျငံ National Health Service (NHS) ရဲ့ radiotherapy physicist တဈဦးဖွဈသူ Mark Long က ကုသရေးအစီအစဉျမြားပွုလုပျရတဲ့ သူ့အလုပျအတှကျ ဂိမျးကစားခွငျးကရတဲ့ အတှအေ့ကွုံမြားဟာ အမြားကွီးအထောကျအကူဖွဈကွောငျး ထောကျခံခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ငယျစဉျက Palace of Magic တို့လို problem solving ဂိမျးမြားကို နှဈသကျစှာ ကစားလရှေိ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။
Mark Long ပွောခဲ့တဲ့ ဥပမာမြားကတော့ ကငျဆာကုသရာမှာ ကငျဆာအကြိတျကိုပဲ radiation ထိအောငျလုပျရပွီး အခွားအစိတျအပိုငျးမြားကို အတတျနိုငျဆုံး မထိအောငျလုပျရသလို တဈခေါကျထကျတဈခေါကျ ကုသတာပိုမိုကောငျးမှနျလာအောငျ ဂရုစိုကျရပါတယျ။ ဒါဟာ ဂိမျးတဈခုထဲမှာ high score တငျရတဲ့အတှအေ့ကွုံနဲ့ တူညီလှပွီး ကငျဆာကြိတျပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးရတဲ့အတှအေ့ကွုံမြားဟာလညျး problem solving ဂိမျးကစားရတဲ့ အတှအေ့ကွုံမြားနဲ့ အလားသဏ်ဍနျတူလှကွောငျး တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဘယျအရာမဆို အလှနျအကြှံလုပျရငျ ဆိုးကြိုးမြားရှိလို့ ဂိမျးအလှနျအကြှံဆော့ကစားခွငျးကတော့ လူအမြားနဲ့ မသငျ့တျောပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဂိမျးကစားခွငျးက ရတဲ့ အကြိုးတရားမြားဟာ မကျြဝါးထငျထငျရှိနပွေီး တကယျ့ဘဝမှာ အသုံးခလြို့ရကွောငျးကတော့ ငွငျးလို့မရတဲ့အမှနျတရားပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။ Esports သတငျးမြားနဲ့ အကွောငျးအရာမြားကို Gaming Noodle မှ အမွဲမပွတျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။